Zvikonzero uye zviratidzo zve meningitis. – Noor Health Life
Zvikonzero uye zviratidzo zve meningitis.
Zuva reWorld Meningitis Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa24 Kubvumbi. Pazuva iri kunorongwa misangano nemisangano yakasiyana-siyana kuitira kuti vanhu vange vachiziva zviratidzo, zvikonzero, marapirwo nekudzivirirwa kwefivha iyi. Zvinofungidzirwa kuti fivha iyi inobata vanhu vanopfuura miriyoni imwe chete pasi rose gore negore. Meningitis inogona kubata vanhu vemazera ese, vangave vadiki kana vakuru. Kurapwa nenguva kunokosha zvikuru, kana fivha ikasvika pamwero une ngozi, inogona kuuraya murwere ane utachiona, saka kungwarira kunodiwa.
Zvisikwa zvakaita gadziriro dzakanakisisa nokuda kwouropi hwomunhu uye cerebellum uye zvakazvichengeta mumisungo mitatu inoita kuti ive yakachengeteka kungozi dzakasiyana-siyana nehosha.Kunyange utachiona huduku muidzi membrane hunokonzera zvirwere zvakawanda. Ma membrane aya anogona kukanganiswa nekukuvara kwemusoro, utachiona hunopinda muropa, utachiona hwemhuno nenzeve, uye meningitis.
Zviratidzo zve meningitis
1. Mumeningitis, murwere anotanga aita kupisa kwakanyanya.
2. Kana mwana aine fivha iyi, anogara achichema.
3. Hapana chinoita kuti ude kudya kana kunwa.
4. Sezvo fivha inowedzera, murwere anotanga kugwinha.
5. Mavara matsvuku anoonekwa pamuviri.
6. Husimbe hwemaziso hunopera.Maziso anofamba zvishoma nezvishoma.
7. Chimwe chezviratidzo zvakakosha kusatendeutsa mutsipa.Mutsipa haupore zvakanaka uye murwere haagone kusimudza mutsipa.Meningitis inogona kuva nengozi zvakadii mune ramangwana?
Geneva: Mushumo wakabudiswa neWorld Health Organization (WHO) waratidza kuti munhu mumwe chete pavanhu vashanu achatambura nedambudziko rokunzwa mumakore anotevera nemhaka yemeningitis nezvimwe zvikonzero.
Maererano nenhepfenyuro dzepasi rose, gwaro raburitswa neWorld Health Organisation raburitsa pachena kuti vanhu vakawanda pasi rose vari kusangana nematambudziko ekunzwa.
Chirevo chakaburitswa neWorld Health Organisation
Maererano naye, kuwedzera kwemeningitis uye kusaziva pamusoro payo kunogona kuva kwakakomba zvikuru nokuti meningitis yakabatana zvakananga nekunzwa.
Maererano nenyanzvi dzezvokurapa, meningitis inokanganisa zvakanyanya uropi nemasero ekunzwa, izvo zvinoita kuti meseji isvike muuropi igurwe.
Nyanzvi dzeWHO dzinoti nyaya yanetsa iyi inogona kugadziriswa chete nekuderedza ruzha munzvimbo dzinogara veruzhinji uye kupa rubatsiro rwekurapwa nenguva.
Chirevo chekutanga chekunzwa pasi rose chakaburitswa neWHO chinoti “mumakumi matatu emakore anotevera, huwandu hwematsi huchawedzera neinopfuura 1.5%, zvichireva kuti munhu mumwe chete pavashanu achave nematambudziko ekunzwa.” ۔
Mushumo wacho unotaura kuti “kuwedzera kunotarisirwa mumatambudziko ekunzwa kunokonzerwawo nekuwedzera kwehuwandu hwevanhu, kusvibiswa kweruzha uye maitiro evanhu.”
Gwaro reWorld Health Organisation (WHO) rinotiwo zvikonzero zvinoita kuti munhu arasikirwe nekunzwa zvichikonzerwa nekutadza kuwana rubatsiro rwezveutano pamwe nekushaikwa kwenyanzvi dzezvehutano munyika dzine mari shoma.
Gwaro iri rinoti, “80% yevanhu vari munyika dzakadai vane dambudziko rekunzwa, vazhinji vacho vasiri kurapwa, asi nyika dzakapfuma hadzisi kuwana rubatsiro rwehutano nekuda kwekuwanda kwevanhu.” Ndapota Unogona email Noor Hutano Hupenyu nemimwe mibvunzo nemhinduro. noormedlife@gmail.com